သီချင်းလေးနဲ့ အပီအပြင် Feel ရင်း ရဲလေး အတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေး နေတဲ့ မြင့်မြတ် ကို ကြည့်ကာ စီးမျောနေခဲ့တဲ့ ယုန်လေးရဲ့ ဗီဒီယို – Cele Oscar
သရုပ်ဆောင် တွေဖြစ်ကြတဲ့ မြင့်မြတ် ၊ ယုန်လေး ၊ ခင်လှိုင်နဲ့ Kညီ တို့ လေးယောက်ကတော့ လတ်တလောမှာ အနုပညာ အလုပ်တွေကို အတူကြိုးစားလုပ်ကိုင် နေတာဖြစ်ပြီး ဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် အတူတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၄ ယောက် ဆုံလိုက်ရင် ရယ်မောစရာ ဟာသလေးတွေကို ဖန်တီးလေ့ရှိတာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေကလည်း အကြိုက်တွေ့နေကြတာပါ။
မကြာခဏ ဆိုသလိုလည်း Tiktok ဗီဒီယိုလေးတွေမှာ အခွီလေး တွေအဖြစ် သီချင်လေး တွေကို အတွဲညီညီ ကပြဖျော်ဖြေလေ့ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ စိတ်ရင်းကောင်းပြီး ညီအစ်ကို တွေလို ခင်မင်းရင်းနှီး ကြတဲ့ သူတို့ ၄ယောက်က ယခုမှာလည်း ချစ်သူငယ်ချင်းကြီး ရဲလေးအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ယုန်လေးက ရဲလေးရဲ့ သီချင်းကို ဖွင့်ကာ ဆုတောင်းပေး နေရင်းကနေ မြင့်မြတ်က သူရဲ့ ရင်ဘတ်လေးကို ဖိကာ သီချင်းလေးနဲ့ အပီအပြင် Feelနေခဲ့တာကြောင့် အမူအရာ တွေအောက်မှာ စီးမျောနေခဲ့တာပါ။ အဆိုပါ ဆုတောင်း ပေးနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးအပြင် ” ၁၁ ရက်နေ့ Birthday အတွက် ကြိုဆုတောင်းပေးပါတယ် . ရဲလေးရေ Happy Birthday Par အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ၁၁ရက်နေ့ မှာ7pm မှာ စဖျော်ဖြေမယ့် Birthday Show လေးလည်း အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ် ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလည်း ရေးသားလာတာ ဖြစ်လို့ ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…..။
သတင်းအရင်းမြစ်: Source – Yone Lay ‘s FB Page
သရုပျဆောငျ တှဖွေဈကွတဲ့ မွငျ့မွတျ ၊ ယုနျလေး ၊ ခငျလှိုငျနဲ့ Kညီ တို့ လေးယောကျကတော့ လတျတလောမှာ အနုပညာ အလုပျတှကေို အတူကွိုးစားလုပျကိုငျ နတောဖွဈပွီး ဘယျသှားသှား ဘာလုပျလုပျ အတူတှနေ့ရေတာလညျးဖွဈပါတယျ။ ၄ ယောကျ ဆုံလိုကျရငျ ရယျမောစရာ ဟာသလေးတှကေို ဖနျတီးလရှေိ့တာဖွဈလို့ ပရိသတျတှကေလညျး အကွိုကျတှနေ့ကွေတာပါ။
မကွာခဏ ဆိုသလိုလညျး Tiktok ဗီဒီယိုလေးတှမှော အခှီလေး တှအေဖွဈ သီခငျြလေး တှကေို အတှဲညီညီ ကပွဖြျောဖွလေရှေိ့တာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ စိတျရငျးကောငျးပွီး ညီအဈကို တှလေို ခငျမငျးရငျးနှီး ကွတဲ့ သူတို့ ၄ယောကျက ယခုမှာလညျး ခဈြသူငယျခငျြးကွီး ရဲလေးအတှကျ မှေးနဆေု့တောငျးပေးလာခဲ့ပါတယျ။
ယုနျလေးက ရဲလေးရဲ့ သီခငျြးကို ဖှငျ့ကာ ဆုတောငျးပေး နရေငျးကနေ မွငျ့မွတျက သူရဲ့ ရငျဘတျလေးကို ဖိကာ သီခငျြးလေးနဲ့ အပီအပွငျ Feelနခေဲ့တာကွောငျ့ အမူအရာ တှအေောကျမှာ စီးမြောနခေဲ့တာပါ။ အဆိုပါ ဆုတောငျး ပေးနတေဲ့ ဗီဒီယိုလေးအပွငျ ” ၁၁ ရကျနေ့ Birthday အတှကျ ကွိုဆုတောငျးပေးပါတယျ . ရဲလေးရေ Happy Birthday Par အစစ အရာရာ အဆငျပွပေါစေ ၁၁ရကျနေ့ မှာ7pm မှာ စဖြျောဖွမေယျ့ Birthday Show လေးလညျး အဆငျပွပေါစလေို့ ဆုတောငျး ပေးလိုကျပါတယျ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလညျး ရေးသားလာတာ ဖွဈလို့ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော…..။
သတငျးအရငျးမွဈ: Source – Yone Lay ‘s FB Page